Shirka Wada-hadalada S/land Iyo Somaliya Waxa Dabada Ka Riixayay Sadexnin Oo Doorashoyin Soo Wajahayaan | Marsa News
June 14, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Somaliland iyo Somalia shirka dib la isugu soo hor fadhiisinayo xilli madaxweynaha Somalia M. A. Farmaajo waxa aan ka badnayn 5 bilood xilkiisa ka hadhsanyihiin maxaa keenay.
Ma garan karno. waxa muuqata dawladaha gadhwadeenka ka ah shirkan in ay ku qancaan Farmaajo hogaamintiisa. miyuu u dhaga nugulyahay? ma dhaqanka maraykanka ee Farmaajo ayaa saamayn ku yeeshay USA in xambaarto? Ma cidda loolanka kula jirta Farmaajo ayay xulufo kale dabada ku wadata? ma dawladaha Maraykanku taagero ayuu Farmaajo la aragti yahay, cabsi weyna aan ku hayn? ma qalalaase hor leh ayaa la rabaa in ka dillaaco somalia iyo somaliland? Farmaajo ma yahay nin maamul gobaleedyada isku keeni kara? Suaa’lo badan ayaa la is weydiin karaa.
balse aragtidayda aniga oo aan ka wada jawaabayn su’aalaha kor aan ku xusay, balse cidaha danayna waxa ku
1- Maraykanku waxa uu ku guul darraystay somalia in dejiyo, Alshabaabna meesha ka saaro
2- AU waxa ay ku guul darraysatay nabad in ay ka dhaliyaan Somalia
3- Ethiopia dan amni ayaa ugu jirta in ay Somalia in ay degto, ka hor inta aanay doorashooyinku ka qabsoomin amma dagaalka bilaa xuduudda ah ee Ethiopia iyo Masar ka dhexeeya oo ay Ethiopia ugu badinayso nidaam dawladeed oo Somalia ka samaysma
4- DP word oo tartan ku abuuraysa dekadaha Djabuuti, sidii loo baajin lahaana geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysa
5- Ilama aha EU aragtiyaha iyo danaha kala geddisan ee kooxa kala socda wataan in ay kula socdaan
6- Ururka Carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda gooni isu taagga Somaliland.
7- Dalalka Africa oo hannaanka doorashooyinka Somaliland cambaar ay ku noqotay, gaar ahaan dalalka jaarka ah.
8- Iyo arrimo kale
Somaliland maxaa lagu qaniinsanyhay?
Somaliland taariikh cusub ayay caalamka ka dhigtay. Somaliland waxa ay khilaaftay dariiqii jabhadihii ka horreeyay ee caalamka ka soo dagaalamay. Jabhadahaas dawlado waaweyn ayaa tunka ku kala sitey. Socodkii dheeraa ee SNM ilaa Somaliland siduu u ekaa?
1- SNM oo aan aduunka dhinacyada loolanka siyaasadeed ka dhexeeyo midna aan si gaar ah ugu xidhnayn, balse ka faa’iidey colaaddii Maxamed Siyaad Barre A.H.N iyo Mangistu Halemariem ee dagaalkii 1977 ka dhashay.
2- Yagleeliddii Somaliland oo caalamku waxba aanu ku darsan shirkii 3 da bilood ka socday Boorama.
3- Miisaaniyadda dawladda Somaliland oo aanay hay’adaha lacagta aduunku deyn ku kabin
4- Amniga iyo kala dambaynta oo dadkeedu samaysteen
Afduubka Somaliland lagu wado danta ku jirtaa maxay tahay?
Guud darrada caalamiga ah ee xagga amniga ee Somalia ka dhacday waxa laga dhex arkay Somaliland xal in ay u noqon karto.
Laakiiin arrintaasi run manoqon kartaa? Sababta oo ah dadka Somaliland iyo Somalia oo aan dhaqan ahaan habka loo maamulo khilaafyada ku kala geddisan, marka laga reebo puntland.
Dhanka kale waxa iyana xusid mudan in sadexda nin ee kala ah, Farmaajo, Abiye iyo Yomomoto, ay sadexduba galayaan doorashooyin, islamarkaana ay arinta wada-hadalada somaliland iyo somaliya ay ku doonayeen inay u noqoto olole siyaasadeed oo taageero ay ugu helaan doonistooda, iyagoo rabay inay gaashan uga dhigtaan loolanka siyaasadeed ee ay wajahayaan.
Hadaba suaasha meesha taal ayaa ah hadii sadexdaa nin laba ka mida ay meesha ka baxaan oo doorashooyinka lagaga adkaado maxaa dhacaya isbadal noocee ah ayaa imin kara suaasha jawaabteeda waxaan u dhaafayaa akhristayaasha
Qalinkii: Mahomed Mataan Jaamac